China Kukwirira kuomarara 6061 6082 7075 2024 aluminium profile yeindasitiri yekushandisa vagadziri uye vanotengesa Huifeng
Kuomarara kwakanyanya 6061 6082 7075 2024 aluminium mbiri yekushandisa kwemaindasitiri
Tsanangudzo yealuminium profile
Chiwanikwa: 2A12, 2014, 2014A, 2017A, 2024, 3003, 5083, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6063A, 6082, 6463,
7020, 7075 nezvimwewo
Rakaumbwa: Sezvo mutengi mufanidzo
Surface kurapwa Mill kupera, anodized, PVDF Painting, Polishing
Kuwanda kweiyo aluminium profile ingori 2.7g / cm3, inova inenge 1/3 yeiyo simbi yesimbi, mhangura kana ndarira (7.83g / cm3, 8.93g / cm3, zvichiteerana). Pasi pemamiriro mazhinji ezvakatipoteredza, kusanganisira mweya, mvura (kana mvura yemunyu), petrochemicals uye akawanda makemikari masystem, aruminiyamu inogona kuratidza yakanakisa ngura kuramba.
Aluminium profile inowanzo sarudzwa nekuda kwayo kwakanakisa magetsi kuitisa. Pamusoro pehuremu hwakaenzana, kuitisa kwealuminium iri padyo ne 1/2 yemhangura.
Iko kupisa kwekushisa kwealuminium alloy ingangoita 50-60% yemhangura, iyo inobatsira mukugadzira kweanopisa kupisa, evaporator, midziyo yekupisa, midziyo yekubika, uye mota humburumbira misoro uye ma radiator.
Aluminium profiles haina-ferromagnetic, inova yakakosha maficha emagetsi nemagetsi maindasitiri. Aluminium profiles haisi yekuzvimiririra inogona kutsva, izvo zvakakosha kune zvinoshandiswa zvinosanganisira kubata kana kubata nezvinhu zvinopisa uye zvinoputika.
Iko kushanda kweiyo aluminium profile kwakanakisa. Mune akasiyana akaremara aruminiyamu alloys uye akakanda aruminiyamu alloys, pamwe nemunyika dzakasiyana kuti maalloys aya mushure mekugadzirwa, iwo machining maitiro anosiyana zvakanyanya, izvo zvinoda yakakosha michina maturusi kana tekinoroji.
Iyo chaiyo tensile simba, goho simba, ductility uye inoenderana nebasa kuomesa mwero inotonga shanduko mukutenderwa deformation.
Aluminium ine yakanyanya kukwirira kugadziriswazve, uye hunhu hweyakagadziriswazve aluminium ingangove isinganzwisisike kubva kune yekutanga aluminium.
1. Mapurani ealuminium epuratifomu (akapatsanurwa kuita marudzi maviri emadhoo nemahwindo nemaketeni madziro).
2. Aluminium chimiro cherediyeta.
3. General maindasitiri aluminium mbiris: Inonyanya kushandiswa mukugadzirwa kwemaindasitiri uye kugadzira, senge michina ine michina nemidziyo, mafupa epakakomberedzwa, uye kambani yega yega inogadzira chakuumba zvinoenderana nezvinodiwa nemishini yekushandisa, senge mabhandi egungano rekutakura, erevheta, vanopa, Midziyo yekuyedza , masherufu, nezvimwewo, anonyanya kushandiswa muindasitiri yemagetsi michina uye makamuri akachena.
4. Aluminium alloy mbiri yechitima mota dhizaini: inonyanya kushandiswa mukugadzira kwechitima mota yemuviri.
5. Kuisa aluminium profiles kugadzira aluminium alloy mapikicha emifananidzo, kuisa akasiyana kuratidzira uye ekushongedza pendi.
Zvinoenderana nesimbi yekuumbwa
Inogona kuve yakakamurwa muzvikamu zvealloy grade aruminiyamu akadai sa1024, 2011, 6063, 6061, 6082, 7075, pakati payo matanhatu akateedzana ndiwo akajairika. Musiyano uripo pakati pemakero akasiyana ndewekuti huwandu hwezvinhu zvakasiyana-siyana zvesimbi zvakasiyana, kunze kwema profiles anowanzo shandiswa ealuminium yemikova nemahwindo Semuenzaniso, kuwedzera kune mapurani ealuminium profiles senge 60 akateedzana, 70 akateedzana, 80 akateedzana, 90 akateedzana, keteni remadziro akateedzana, maindasitiri aluminium profiles haana yakajeka modhi kusiyanisa, uye vazhinji vagadziri vanozvigadzira zvinoenderana nemadhirowa chaiwo evatengi.
Zvinoenderana nekurapa kwepamusoro
1. Anodized aruminiyamu
2. Electrophoresis yakafukidzwa aluminium
3. Poda yakasaswa aruminiyamu
4. Wood chibage chinja aruminiyamu
5. Fluorocarbon yakasaswa aluminium
6. Yakakwenenzverwa aruminiyamu
tinogona kuburitsa musono aluminium chubhu, aluminium bhaa, pombi yealuminium, uye maindasitiri profiles aluminium, alloy akateedzana kubva 1xxx kusvika 7xxx, hasha O H112 H24 T3 T4 T5 T6 T8 T651 Nezvimwewo.
Pashure: Mugadziri mhando yepamusoro 10-260mm 6061-t6 aluminium bar
Zvadaro: 5083 embossed aruminiyamu pepa
aluminium mbiri yeketeni madziro
anodized aruminiyamu profile
simba rakafukidzwa aluminium profile
roller shutter aluminium chimiro
T-Slot aluminium chimiro
OEM chiwanikwa 6061/6082 / 6063/6005 maindasitiri ...